Ajụjụ - Hongyuan Wheel Group Co., Ltd.
Ewu Equipment rim
Kedu otu esi ahọrọ oke rim maka taya?
Ogwe ahụ kwesịrị inwe otu dayameta na obosara nke dị ka taya, e nwere ezigbo akara rim maka taya ọ bụla na-agbaso ụkpụrụ ụwa dịka ETRTO na TRA. Nwekwara ike ịlele taya & rim kwesịrị ekwesị chaatị na gị soplaya.
gịnị bụ 1-pc rim?
1-PC rim, nke a na-akpọkwa otu rim rim, ka emere site na otu mpempe ígwè maka ihe mkpuchi rim ma me ya ka ọ dị n'ụdị profaịlụ dị iche iche, 1-PC rim dịkarịsịrị n 'okpuru 25 ", PC rim bụ ìhè arọ, ìhè ibu na elu na-agba, ọ na ọtụtụ-eji na ọkụ ugbo ala dị ka ugbo ala traktọ, ụgbọala na-adọkpụ, tele-handler, wheel excavator, na ndị ọzọ ụdị ụzọ ígwè. Ibu nke 1-PC rim dị mfe.
ihe bụ 3-pc rim?
3-PC rim, nke a na-akpọkwa rim-mpempe rim, ka emere site na mpempe ato nke rim base, mgbachi mkpọchi na Flange. 3-PC rim na-ejikarị nha 12.00-25 / 1.5, 14.00-25 / 1.5 na 17.00-25 / 1.7. 3-PC bụ ọkara ibu, ọkara ibu na elu na-agba, ọ na ọtụtụ-eji na-ewu equipments dị ka graders, obere & n'etiti wheel loaders na forklifts. Ọ nwere ike ibu karịa 1-PC rim mana enwere oke ọsọ.
gịnị bụ 4-pc rim?
5-PC rim, nke a na-akpọkwa rim ise, ka a na-eme site na mpempe ise nke nwere isi rim, mgbanaka mkpọchi, oche bead na mgbanaka abụọ n'akụkụ. 5-PC rim na-ejikarị nha 19.50-25 / 2.5 ruo 19.50-49 / 4.0, ụfọdụ rim ahụ sitere na nha 51 ”ruo 63” bụkwa akụkụ ise. 5-PC rim bụ arọ dị arọ, ibu dị arọ na obere ọsọ, a na-ejikarị ya eme ihe na ihe ndị na-ewu ihe, dịka ndị na-eme dozers, nnukwu ndị na-ebu wiil, ndị na-ekwu okwu, nnukwu gwongworo na igwe ndị ọzọ.
Olee ụdị ụdị forklift rim?
E nwere ọtụtụ ụdị forklift rims, nke akọwapụtara site na nhazi ọ nwere ike kewaa rim, 2-PC, 3-PC na 4-PC. Split rim bụ obere na ọkụ ma jiri obere forklift, 2-PC rim bụkarị nnukwu nha, 3-PC na 4-PC rim na-eji n'etiti na nnukwu forklift. 3-PC na 4-PC rims bụ ọtụtụ obere nha na mgbagwoju anya imewe, ma ha nwere ike ibu ibu na elu na-agba.
Kedu oge idu?
Anyị na-ejikarị rụchaa mmepụta na izu 4 ma nwee ike belata izu 2 mgbe ọ dị mkpa. Dabere na ebe njem oge nwere ike ịbụ izu abụọ ruo izu isii, yabụ ngụkọta oge ndu bụ izu isii na izu 10.
Kedu ihe bụ HYWG?
Anyị na-emepụta ọ bụghị naanị rim zuru ezu kamakwa akụkụ mmiri, anyị na-enyekwa OEM zuru ụwa ọnụ dị ka CAT na Volvo, ya mere uru anyị bụ Ngwaahịa zuru ezu, Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Nile, qualitydị Mma na Ike R & D.
Kedu ụdị ụkpụrụ ngwaahịa ị na-eso?
Anyị OTR rims tinye ọkọlọtọ zuru ụwa ọnụ ETRTO na TRA.
Kedu ụdị eserese ị nwere ike ịme?
Ihe osise anyị bụ E-mkpuchi, eserese anyị n’elu bụ ntụ ntụ na akwa mmiri.
Olee otú ọtụtụ ndị rim mmiri ị nwere?
Anyị nwere mgbachi mkpọchi, akụkụ mgbanaka, bead oche, ọkwọ ụgbọala isi na Flange maka iche iche iche nke rims si size 4 "ka 63".
Ekwentị: +86 573 8207 7092
Faksị: +86 573 8207 7092
Okwu: Hongyaun Wheel Group CO., LTD